Minthila Online Store USA, 4106 50th ST woodside, New York, NY (2021)
USA မှ (January / 8)တွင် ပို့ဆောင်သောပစ္စည်းများ (January / 15) တွင် ရန်ကုန်သို့ရောက်ပါပြီ ခင်ဗျာ။
January / 15
January / 22
January / 29
USA to Yangon သယ်ယူလိုသော Customer များအနေဖြင့်အောက်ပါ နှုန်းထားများအတိုင်း မင်းသီလမှ ကောက်ခံပေးပါသည်။
အဝတ်အထည်၊အရုပ်၊အစားအစာ၊ဦးထုပ်၊ခါးပတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ် = 1Lb $7.99
ဆေး၊အလှကုန်၊နာရီ၊မျက်မှန်နှင့်ဖိနပ် = 1Lb $8.99
ရေမွှေး၊စက်ပစ္စည်း၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ကင္မရာ = 1Lb $9.99
(တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်း ၊ ထုထည်ပွ ၊ ကုန်ပွ ၊ အရည်ပုလင်း ၊ အလှကုန် ၊ ဆေး ၊ အိတ်) များအတွက်အပိုကြေးရှိနိုင်ပါသည်။ (အာမခံ၀ယ်ယူ၍လည်းသယ်ယူလို့ရပါသည်။)အာမခံ၀ယ်ယူထားသောပစ္စည်းအတွက်သာတန်ဖိုးအပြည့်ပေးလျော်ပါမည်။အသေးစိတ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
USAမှပစ္စည်းများအားOnlineမှ(CB Bank/ KBZ Bank/AYA Bank မှ Visa , Master ကဒ်များ ဖြင့်) မိမိကိုယ်တိုင်မှာယူ၍USA(မင်းသီလ company)New Yorkလိပ်စာတွင်ပစ္စည်းလက်ခံပေးပါသည်။USA Branded Online Shop ဆိုင်ဖွင့်လိုသူများ အတွက် Online မှ ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့် ပြန်လည်ရောင်းချပုံအဆင့်ဆင့် များကိုလည်း သင်ယူချင်ပါက အခမဲ့ သင်ကြားပေးပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား
Messenger ၊ Viber (001-347-744-2728) နှင့် 09250024653.09404477118.09404477119 ဖုန်းများသို့လည်း ပိတ်ရက်မရှိမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်း များ မင်းသီလUSA ရုံးခန်းသို့ရောက်မရောက် ကိုလည်း အမြန်ဆန်ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
(CB Bank/ KBZ Bank မှ Visa , Master ကဒ်များ ဖြင့်)USA Official Site‎ တို့မှ မိမိကိုယ်တိုင်မှာယူပြီး
41-06, 50th Street, Apt#6C,
Woodside, NY 11377 New York
US Phone Number - 17186724842 ၊ 13477442728
တွင်ပစ္စည်းလက်ခံပေးပြီးရန်ကုန်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။E-Bay မှဝယ်ယူမှုများအတွက်လည်း စီမံဆောင်ရွှက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အမှတ် ၇၂၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း ၊ မင်္ဂတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။09250024653.09404477118.09404477119. သို့ လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နေ့စဉ် မနက် ၇နာရီမှ ည ၁၂ နာရီထိ ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၊အချိန်နှင့်တပြေးညီ( မနက် 7နာရီမှ ည 12 နာရီအထိ) သိရှိလိုသည်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်နိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် အလျှင်အမြန်ဆက်သွယ်ကာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09250024653 ၊ 09404477118 ၊ 09404477119 ၊ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
NewYork to Yangon Carrier Charge ခအတွက်ငွေပေး‌ချေရာတွင် KBZ ,CB,AYA, Mobile Banking သို့မဟုပ် Bank တခုခုမှ ‌ငွေပေး‌ချေပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
https://www.facebook.com/minthilaonlinestore (Minthila Online Store USA)
30% မွ 50% ‌‌ကျော်‌ကျော် ထိကို‌လျော့ပေးနေတာဆိုတော့ အမြန်ဆုံးဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်။
Minthila Online Store USA " ( Newyork To Yangon ပို့ဆောင်ပေးပါသည်)
USAမှပစ္စည်းများအားOnlineမှ(CB Bank/ KBZ Bank/AYA Bank မှ Visa , Master ကဒ်များ ဖြင့်) မိမိကိုယ်တိုင်မှာယူ၍USA(မင်းသီလ company)New Yorkလိပ်စာတွင်ပစ္စည်းလက်ခံပေးပြီ New Yorkမှရန်ကုန်သို့သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။USA Branded Online Shop ဆိုင်ဖွင့်လိုသူများ အတွက် Online မှ ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့် ပြန်လည်ရောင်းချပုံအဆင့်ဆင့် များကိုလည်း သင်ယူချင်ပါက အခမဲ့ သင်ကြားပေးပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၊ အာမခံချက်အပြည့်အဝရှိခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ( မနက် 7နာရီမှ ည 12 နာရီအထိ) သိရှိလိုသည်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်နိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် အလျှင်အမြန်ဆက်သွယ်ကာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Be the first to know and let us send you an email when Minthila Online Store USA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to Minthila Online Store USA:
minthila online store USA 1
" Minthila Online Store USA " ( Newyork To Yangon အထူးအာမခံစနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္) USAမွပစၥည္းမ်ားအားOnlineမွ(CB Bank/ KBZ Bank မွ Visa , Master ကဒ္မ်ား ျဖင့္) မိမိကိုယ္တိုင္မွာယူ၍USA(မင္းသီလ company)New Yorkလိပ္စာတြင္ပစၥည္းလက္ခံေပးပါၿပီးNew Yorkမွရန္ကုန္သို႔အထူးအာမခံစံနစ္ျဖင့္သယ္ေဆာင္ေပးပါသည္။USA ျဖစ္ ပစၥည္းမ်ား www.usaonlinestore.com မွ၀ယ္ယူႏိုင္ ပါသည္. ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ Online Shop မ်ားအတြက္ (CB Bank/ KBZ Bank မွ Visa , Master ကဒ္မ်ား ျဖင့္)USA Official Site‎ ( www.macys.com ,www.katespade.com , www.guess.com ,www.sephora.com , www.hm.com , www.walmart.com , www.forever21.com , www.zara.com , www.kyliecosmetics.com ,www.amazon.com )တို႔မွ မိမိကိုယ္တိုင္မွာယူၿပီး Minthila 41-06, 50th Street, Apt#6C, Woodside, NY 11377 New York တြင္​ပစၥည္​းလက္​ခံ​ေပးၿပီး၇န္​ကုန္​သို႔အထူးအာမခံစနစ္ျဖင္​့ပို႔​ေဆာင္​​ေပးပါသည္။E-Bay မွဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္လည္း စီမံေဆာင္ရႊက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္= 1 718 672 4842 , USA Viber 001 347 744 2728(အေသးစိတ္ေမးျမန္းရန္)
Minthila Online Store USA 21
PC & E-mail Help
4115 48th St, Lake Sunnyside
The UPS Store 6052
45-12 46th St, Queens
56-21 43rd Ave, Woodside
Marco Bernardes Lettering
60-29 roosevelt ave, Woodside
5940 Queens Blvd, Apt 1G
148-01 Hillside Avenue, Jamaica
45-45 39th Street, Long Island City
Castle Graphics & Signs
2374 Amsterdam Ave
33 W 17th St, Fl 4th
4049 71st street, Woodside
Fastsigns of West Babylon
46A Kean Street, West Babylon
Hi there...guess u0140l2 available?..pls reply..
https://www.facebook.com/minthilaonlinestore (Minthila Online Store USA) 30% မွ 50% ‌‌ကျော်‌ကျော် ထိကို‌လျော့ပေးနေတာဆိုတော့ အမြန်ဆုံးဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်။ NewYork to Yangon Carrier Charge ခအတွက်ငွေပေးချေရာတွင် KBZ ,CB,AYA, Mobile Banking သို့မဟုပ် Bank တခုခုမွ ငွေပေးချေပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ USA မှ (July 28) တွင်ပို့ဆောင်သောပစ္စည်းများ (July 30)တွင်ရန်ကုန်ရောက်ပါပြီ။ (ပို့ဆောင်မှုကြာချိန် 2ရက်) USA မှ ရန်ကုန်သို့ ပစ္စည်း ပို့သည့် နေ့များ July / 31 / 2020 August /4/ 2020 August /7/ 2020 August / 11 / 2020 August / 14 / 2020 August / 18 / 2020 August / 21 / 2020 August / 25 / 2020 August / 28 / 2020 တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်USA မှ Myanmar သို့ပိုဆောင်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ။ NewYork to Yangon Carrier Charge ခအတွက်ငွေပေး‌ချေရာတွင် KBZ ,CB,AYA, Mobile Banking သို့မဟုပ် Bank တခုခုမှ ‌ငွေပေး‌ချေပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ USA to Yangon သယ်ယူလိုသော Customer များအနေဖြင့်အောက်ပါ နှုန်းထားများအတိုင်း မင်းသီလမှ ကောက်ခံပေးပါသည်။ အဝတ်အထည်၊အရုပ်၊အစားအစာ၊ဦးထုပ်၊ခါးပတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ် = 1Lb $7.99 ဆေး၊အလှကုန်၊နာရီ၊မျက်မှန်နှင့်ဖိနပ် = 1Lb $8.99 (ပေါင် 100 နှင့်အထက်ပို့ဆောင်ပါက 1Lb =$7.99 နှုန်း) ရေမွှေး၊စက်ပစ္စည်း၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ကင္မရာ = 1Lb $9.99 (ပေါင် 100 နှင့်အထက်ပို့ဆောင်ပါက 1Lb =$8.99 နှုန်း) (တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်း ၊ ထုထည်ပွ ၊ ကုန်ပွ ၊ အရည်ပုလင်း ၊ အလှကုန် ၊ ဆေး ၊ အိတ်) များအတွက်အပိုကြေးရှိနိုင်ပါသောကြောင့်မဝယ်မီ US ရုံးသို့ဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာ။ Minthila Online Store USA " ( Newyork To Yangon အထူးအာမခံစနစ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်)
Get this to promote the speed rate of your sales, expand your customer base and improve your customer loyalty. Just click and follow this link
Best smart phone site in U.S.A.!Get offers price....! Click link :
Best smart phone site in U.S.A.!Get offers price....! Click link : http://bit.ly/2mN0wHj
မွာတာ ျမန္လဲျမန္တယ္ ဒီမွာဆို trackpd2က ၂၄၀၀၀၀ ေက်ာ္တယ္ e-bay ကေနဝယ္တာ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ပဲက်တယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေနာက္လဲဝယ္ပါဦးမယ္ 😎 ဒီ့ထက္မက ေအာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ 😇
PLACE USA MOTHER BONE INSTORE ON SALE FOR A MYANMAR PLACE HALP SALE IN MYANMAR 100YEAR ON THE 1 MONTH 100 DOLLAR GIVE ME PLEASE BUY. THANKS FOR YOU.
https://www.nesafashion.com/ $24 Free Worldwide Shipping
https://www.nesafashion.com/ $24 Free Shipping